10 Geofumadas ee Maarso 2011 - Geofumadas
Maarso, 2011 AutoCAD-AutoDesk, Geospatial - GIS, GvSIG, tabo cusub, Microstation-Bentley
Waqtigaan sanadka badanaa waa mid aad u firfircoon bilaabida noocyo cusub iyo xalal loogu talagalay arrinta juqraafiga. Halkan waxaan ku soo koobayaa ugu yaraan 10 oo dareenkeyga soo jiitay maalmihii ugu dambeeyay, saacadaha iyo daqiiqadaha.
ERDAS, wuxuu bixiyaa cusboonaysiinta Japan ee sawirada dayax-gacmeedka bilaash ah
Bentley Navigator, oo lagu magacaabo Top of the alaabta cusub ee isticmaalka teknoolajiyada si ay qaybta dhismaha.
Waan ammaanaa, oo ah qadar qiimo leh oo gvSIG ka faa'iideystey, waana in ay ka baxdaa wixii ka baxsan deegaanka Anglo-Saxon.
Pointools, wuxuu gaadhay heshiis ku saabsan Qiyaasaha Qalabka Cabbiraadaha (MDL) ee qalab kasta oo cusub oo laysirada laser ka ah SPAR 2011.
Cadastre Spain, horeba waxay leedahay xal cusub oo ku saabsan jawaabta xogta cadawga ee hab weyn.
GvSIG, nooca RC ee gvSIG 1.11 hadda waa la heli karaa
AUGI, bulshada caalamiga ah ee isticmaala ee AutoDesk waxay dhaaftay xubnaha 200,000 bishii March ee 7.
AutoCAD 2012, ayaa si rasmi ah u bilaabaya baaxadeeda hordhaca ah, oo ay ku jiraan taageerada daruuraha dhibcaha, BIM iyo aaladaha diiwaangelinta moodooyinka.
3D, AUGI World wuxuu la yimid hage loogu talagalay Design Sustainable iyadoo la adeegsanayo AutoCAD Macaamiisha 3D.
Bentley Systems, waxay xaqiijin doontaa websaydhkan 7 ee bisha Abriil halkaas oo ay u malaynayso inay muujinayso kartida Bentley Map V8i ee ku saabsan 3D ee macluumaadka kaabayaasha dhaqaalaha.
Post Previous" Hore Majaladda PC, oo u guureysa nooca dhijitaalka ah
Post Next Maxaa Cusub ee AutoCAD 2012, Qaybta KoowaadNext »